Fandrobana faobe tao Toliara: 50 voasambotra, iray naratra voatifitra, roa hafa naratra mafy | NewsMada
Nohararaotin’ny andian’olona tsy fantatra nanaovana fandrobana faobe ny hetsiky ny mpianatry ny oniversiten’i Maninday, ny asabotsy teo. Tsena sy magazay maromaro voaroba. Nisy 50 mahery voasambotra. Olona telo naratra ka ny iray hoe naratra voatifitra.
Mpivarotra ampolony maro ny niharan’ny fandrobana nataon’ny andian’olona tsy fantatra tao amin’ny tanànan’i Sakamaha, Toliara. Tamin’ny valo ora maraina, nanao fihetsiketsehana teo amin’io toerana io ny mpianatry ny oniveriste ao an-toerana ka avy nandrava izany ny mpitandro filamianan ary nampiditra azy ireo tao amin’ny faritry fianarana ao Maninday. Teo an-dalam-pamerenana ireo mpianatra ireo anefa, nisy andian’olona maro tsy fantatra mazava tonga nandroba sy nanimba ny tsena ao amin’ny tanàna avy nanesoran’ny zandary ireo mpianatra. Antapitrisany ny fatiantok’ireo mpivarotra tamin’izany ary tapitra tsy nisy niangana ny tsena nanamoron any arabe ao an-toerana. Tao anatin’izay, olona iray voan’ny balan’ny mpitandro filaminana tao an-toerana ary roa hafa naratra, izy telo ireo izay efa samy nahazo ny fitsaboana sahaza azy avy. Olona 50 izay marihina fa tsy nisy mpianatra, na iray kosa aza, nosamborina rehefa hitan’ny zandary fa nanao fanakorotanana sy niteraka fandrobana.
Niravona ny olan’ny mpianatra…
Ho famahana ny olan’ny mpianatra ao an-toerana izay nanao fitokonana lava indrindra ankoatra ireo oniveriste rehetra nanarena ny Nosy, tonga namaha ny olan’izy ireo ny solontenan’ny fitondrana. Omena amin’ny ity herinandro ity avokoa noho izany ny vatsim-pianarana efa-bolana sy ireo fangatahana rehetra nataon’ny mpianatra. Araka izany, niravina tanteraka ary tsy tokony hisy intsony ny fitokonana ao Maninday raha ny nambaran’ireo solontenam-panjakana tonga tany an-toerana.
CMS & Tsiferana Randriatiana